जानकीका वडाध्यक्षहरु भन्छन्, ‘नागरिकलाई आधारभूत सेवा साझा एजेन्डा’ – Satyapati
जानकीका वडाध्यक्षहरु भन्छन्, ‘नागरिकलाई आधारभूत सेवा साझा एजेन्डा’
सत्यपाटी । २३ श्रावण २०७८, शनिबार
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहभित्र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको वडापालिका नै हो । जनताको घरदैलोमै सेवा सुविधा पुर्याउने, गुनासो सुन्ने, दुःखसुखमा साथ दिने नजिकको पहिलो निकाय भएकोले वडापालिकाहरुको भूमिका र सक्रियता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले जुनसुकै गाउँपालिका होस्, उसले एक्लैले चाहेर विकास र परिवर्तन सम्भव छैन । पालिकामा चौतर्फी विकासका लागि वडापालिकाहरुको पनि उत्तिकै साथ, सहयोग, सहकार्य, समन्वय, साझेदारी आवश्यक छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, सडक बिस्तार लगायत नागरिकका लागि आधारभूत सेवा सुविधाहरु गाउँ र वडापालिकाहरुको साझा एजेन्डा हुन् । दुई दशकपछि अस्तित्वमा आएको स्थानीय तह अन्तरगत वडा कार्यालयहरुले सक्रिय एवं ईमान्दार भई काम गर्ने हो गाउँबस्तीको मुहार फेरिन समय लाग्दैन । तत्कालिन गाउँ विकास समितिको भौगोलिक एवं जनसांख्यिक संरचनाजस्तै रहेका वडापालिकाहरुले तदारुकताका साथ परिवर्तन र विकासको स्पष्ट खाका कोरेर निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने हो भने गाउँबस्तीको मुहार फेरिन कठीन छैन ।
यद्यपि, वडागत भौगोलिक अवस्थिति, भेषभुषा, संस्कृति, समुदायगत पहिचान लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार केही फरक योजनाहरु भए पनि उनीहरु सबैको नीति, योजना र एजेन्डाको प्राथमिकतामा खासै फरक नभएर एकरुपता देखिन्छ । यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर जानकी गाउँपालिका वडा नं. १, साइगाउँका अध्यक्ष मो.रजा राई, वडा नं. २, बेलभारका अध्यक्ष चन्द्रीकाप्रसाद गुप्ता, वडा नं. ३, इन्द्रपुरका अध्यक्ष विन्देश्वरी बर्मा (कुर्मी), वडा नं. ४, खजुराखुर्दका अध्यक्ष बिश्राम बर्मा, वडा नं. ५, बेलहरीका अध्यक्ष रमेशकुमार बर्मा र वडा नं. ६, गनापुरका अध्यक्ष सुरेश अहिरसँग संक्षेपमा गरिएको कुराकानी :
‘चुनौतीलाई छिचोल्दै अघि बढेका छौं’
मो.रजा राई, वडाध्यक्ष – वडा नं. १, साइगाउँ
जानकी गाउँपालिकाको वडा नं १ मा ६४३१ जनसंख्याको बसोबास रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यस वडाले विकासले गति लिएको छ । कोरोना महामारीले विकासमा केही प्रभाव पारे पनि हाम्रो प्राथमिकताअनुसार वडाको विकास भइरहेको छ । अहिले सञ्चालन भइरहेका योजनाहरु र आफ्नो गाउँघर, छरछिमेक, शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने कुरामा अहिलेसम्म सबै वडावासीहरुको सकारात्मक सहयोग पाएको छु । विकासको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पर्याप्त स्रोत साधन हो । उपलब्ध स्रोतलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सकियो भने कम बजेटमा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले शून्यबाट हाम्रा कामहरु सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्थामा वडाबासीले सोचेजति काम नभएको हुनसक्छ । हामीलाई पनि सुरुका दिनमा निकै कठीन थियो । हामी निर्वाचित भएर आई सकेपछि कानुन, विधिविधानमा अलमल हुनुपर्यो । तथापी त्यसलाई पनि चिर्दै वडापालिकालाई प्रभावकारी रुपमा विकासका योजना र सुशासनका काममा गति दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लाग्दै गर्दा विकासका योजनाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । कतिपय योजनाहरु सम्पन्न गर्न बाँकी छन् ती कामहरु पनि पूरा हुन्छन् । पहिलो एक वर्ष सिकाईमै बित्यो । अहिले संविधानले दिएका जुन अधिकार र कार्यक्षेत्र, स्थानीय तहमा आएका छन्, त्यसले गर्दा पनि अब सबैको समझदारी सहमतिमा अघि बढ्दा सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त रुपमा सेवा दिन सकिरहेका छौं ।
अझ भन्ने हो भने हामीले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई सकेसम्म पुरा गरेका छौं भन्ने लाग्छ । बाँकी रहेका प्रतिवद्धताहरुलाई पनि पुरा गर्ने प्रयत्नमा लागि रहेका छौ । जनताको चाहना आफु वडा कार्यलयमा जाँदा साथ काम हुनुपर्छ भन्ने छ । हामी पनि त्यही चाहि रहेका छौ । जनताले छिटोछरितो सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो यो मान्यता पनि हो । र आएका सेवाग्राहीलाई हुने कामलाई छिट्टै गरिदिने र नमिलेका कामलाई यस कारणले तपाईको काम हुन सकेन यो मिलाएर आउनुहोस् भन्ने गरेका छौं । हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनतालाई यसको प्रत्याभूति दिलाउँदै सेवाग्राहीका भावना र उहाँहरुका भनाईलाई कदर गर्दै अघि बढिरहेका छौं । जनप्रतिनिधिहरु निरन्तर जनताको काममा खटिएका छौं ।
जनताको व्यापक गुनासो र समस्या हुँदाहुँदै साइगाउँ वडापालिका अन्तरगतका गाउँबस्ती ओझेलमा परेका थिए । हामी निवाचनपछि हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकास र परिवर्तनका लागि दिनरात खटेर काम गर्दैछौं । निर्वाचन जितेपछि जतिबेला पनि वडाबासीकै साथमा रहने बाचा अनुसार वडाबासीको सुखदुखमा साथ दिइरहेको छु । निर्वाचित भएयता स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि प्राप्त गर्यो र त्यसको एउटा पात्र म पनि हुँ । निर्वाचनपछि कामको चाप पनि निक्कै धेरै छ । जनताका दैनिकीहरुसँग हामी भिडिरहेका छौं । उहाँहरुको सेवामा हामी तल्लिन भइरहेका छौं ।
विकासको धेरै क्षेत्रमा केही हदसम्म सुधार भए पनि अझै पनि धेरै चुनौतीहरु थपिँदै गएका छन् । त्यसलाई छिचोल्ने प्रयत्न गर्दैछौं । विकासका लागि सम्भावना खोज्ने हो, पहिल्याउने हो । स्रोतको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छौं । कृषि, पर्यटन, शैक्षिक सुधार र स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकीकरण गर्दै वडाभित्रका समग्र कामहरु समुचित ढंगबाट अघि बढिरहेका छन् । कानूनहरु बनेका थिएनन्, कानून बनाउँदै काम गर्दै जाँदा केही ढिलासुस्ती र सोचेअनुसार विकास नभएको होला, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौं । नीति र योजना बनाउन समय लाग्छ । योजना अनुसार बजेटको व्यवस्थापन बिना कुनै काम वा विकास सम्भव छैन । त्यसको विनियोजन गर्दै केही समय गयो । तर, काम सुरु भएदेखि हामीले पछाडि फर्किनुपरेको छैन ।
‘जनसहभागिताले विकासमा निरन्तरता’
चन्द्रीकाप्रसाद गुप्ता, वडाध्यक्ष – वडा नं. २, बेलभार
जानकी गाउँपालिका वडा नं २ मा ५३१८ जनसंख्या बसोबास गर्दछन् । यहाँ मधेसी र मुस्लिम समुदायको बसोबास बाक्लो भएपनि अन्य समुदाय पनि यहाँ बस्दछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले शून्यबाट हाम्रा कामहरु सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्थामा वडाबासीले सोचेजति काम नभएको हुनसक्छ । हामीलाई पनि सुरुका दिनमा निकै कठीन थियो । कानूनहरु बनेका थिएनन्, कानून बनाउँदै काम गर्दै जाँदा केही ढिलासुस्ती र सोचेअनुसार विकास नभएको होला, त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौं ।
हामी निर्वाचित भएर काम सुरु भएदेखि हामीले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । जनप्रतिनिधिहरु निरन्तर जनताको काममा खटिएका छौं । जनसहभागितामा आधारित विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छौं । कुनै पनि ठाउँको विकासको लागि नीति, योजना, बजेट, स्रोत र जनसहभागिता अत्यन्तै आवश्यक छ । विकास निर्माणका काममा जनसहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । वडाकै जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । कानून अनुसार मिल्ने साना योजना उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गरेर स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा बनेको अनुगमन समितिले काम ठीक भए÷नभएको अनुगमन समेत गर्ने गरेका छौं ।
हामी निर्वाचित भएर आएपछि वडाभित्र १८ किलोमिटर नयाँ कृषि सडक बनेको छ । यसले किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सहज र सुलभ भएको छ । वडाभित्र २० किलोमिटर नालीसहितका सडकहरु पीसीसी भएका छन् भने झण्डै प्रदेश सरकारको बजेटबाट एक किलामिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । वडाभित्र रहेका पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय र मदरसामा भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । भृकुटी आधारभूत विद्यालयमा २ तले ६ कोठे र नेराप्रावि वनकटवामा २ कोठे भवन निर्माण गरेका छौं ।
महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न हामी लागिपरेका छौं । तर गत बर्षदेखि कोरोना संक्रमणका कारण हाम्रा शैक्षिक अभियान केही प्रभावित बनेको छ । सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन अहिले पनि विभिन्न सचेनतामूलक कामहरु भइरहेका छन् । गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि धेरै सकारात्मक कामहरु भएका छन् । यसबाट स्थानीयलाई आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने चेतना बृद्धि भएको छ । किसानहरुका लागि तालिम तथा अन्य आवश्यकीय कामहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर कृषि पेशालाई आधुनिकीकरणसँगै सबल बनाउन लागिपरेका छौं । कृषि उत्पादनको लागि कृषकलाई आधुनिक खेती गर्न बोरिङ जडान तथा बीउबीजन वितरण गर्दै आएका छौं ।
वडाभित्रका किसानहरुका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा प्याजको बीउ वितरण गरेका छौं भने अनुदानमा धान, गहुँ, विभिन्न जातको तरकारीको बीउ पनि वितरण गरेका छौं । सिचाइँ नभएको ठाउँमा कृषि मोटर÷पम्पसेटहरु जडान गरेका छौं । तर, हामीकहाँ मल वितरणमा निकै समस्या छ । यहाँ समयमा मल नपाउँदा भारतीय बजारबाट रासायनीक मल ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उताबाट मल ल्याउँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)सँग लड्नपर्छ । यता ल्याएपछि नेपाली सुरक्षाकर्मीले अवैध भनेर जफत गर्छन् । यसले नेपाली किसानलाई सास्ती हुने गरेको छ । सरकारले नै कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ ।
सरकारले उचित समयमै स्वदेशमै मल, बीउबीजन र सिचाइँको पर्याप्त उपलब्धता गराउन सक्नुपर्छ । अझ कृषिमा चक्लाबन्दी नगरेसम्म कृषि क्षेत्रको सुधार सम्भव छैन । हाम्रो वडाबाट हालसम्म ३० जनालाई मैनबत्ती र अगरबत्ती बनाउने तालिम दिएका छौं । ३२ जनालाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरेका छौं । १५ जना किसानलाई चारा (घाँस काट्ने) मेसिन वितरण गरेका छौं भने ५० जनालाई सिलाई मेसिन वितरण गरेका छौं । १५० घरधुरीलाई खानेपानीका लागि ह्याण्ड पम्प वितरण गरिसकेका छौं । यसले विपन्न र न्यून आय भएका परिवारको आर्थिक अवस्थामा थप सुधार हुँदै गएको छ ।
वडाभित्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतको तुलनामा भन्दा उल्लेख्य सुधार भएको छ । बेलभार स्वास्थ्य चौकीबाट दिइने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं । सुत्केरी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सेवाग्राहीको लागि थप सहज र सरल बनाएका छौं । बेलभार स्वास्थ्य चौकीमै प्रसुति कक्ष सञ्चालनमा रहेको छ । यहाँ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १७, जानकी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ३ बाट समेत सुत्केरी गराउन तथा अन्य विरामीहरु उपचारका लागि आउने गर्नुहुन्छ । समग्रमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकीकरण गर्दै वडाभित्रका समग्र कामहरु समुतित ढंगबाट अघि बढिरहेका छन् । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
‘जनताका दैनिकीसँग भिडिरहेका छौं’
विन्देश्वरी बर्मा (कुर्मी), वडाध्यक्ष – वडा नं. ३, इन्द्रपुर
जानकी गाउँपालिका वडा नं ३ मा ९८४५ जनसंख्या रहेको छ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि कानून, विधि विधानमा केही समय अलमल भयो, तर त्यसलाई पनि चिर्दै वडापालिकालाई प्रभावकारी रुपमा विकासका योजना र सुशासनका काममा गति दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लाग्दै गर्दा विकासका योजनाहरु सञ्चालन भैरहेका छन् । अझ भन्ने हो भने हामीले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई सकेसम्म पुरा गरेका छौं भन्ने लाग्छ । बाँकी रहेका प्रतिवद्धताहरुलाई पनि पुरा गर्ने प्रयत्नमा लागि रहेका छौ । जनताको चाहनाअनुसार कार्यालयबाट काम हुनुपर्छ भन्ने छ । कतिपय योजनाहरु सम्पन्न गर्न बाँकी छन्, ती कामहरु पनि पूरा हुन्छन् ।
हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनतालाई यसको प्रत्याभूति दिलाउँदै सेवाग्राहीका भावना र उहाँहरुका भनाईलाई कदर गर्दै अघि बढिरहेका छौं । पहिलो एक वर्ष सिकाईमै बित्यो । जनताले छिटोछरितो सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । र आएका सेवाग्राहीलाई हुने कामलाई छिट्टै गरिदिने र नमिलेका कामलाई यस कारणले तपाईको काम हुन सकेन यो मिलाएर आउनुहोस् भन्ने गरेका छौं । अहिले संविधानले दिएका जुन अधिकार र कार्यक्षेत्र, स्थानीय तहमा आएका छन्, त्यसले गर्दा पनि अब सबैको समझदारी सहमतिमा अघि बढ्दा सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्तरुपमा सेवा दिन सकिरहेका छौं । जानकी गाउँपालिकाको अन्य वडाभन्दा शैक्षिक, आर्थिक, कृषि, प्रविधि, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायत जनताको आधारभूत आवश्यक्ताको सवालमा इन्द्रपुर पहिलेदेखि नै अलि पछाडि नै परेको थियो ।
निर्वाचनबाट हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकास र परिवर्तनका लागि दिनरात खटेर काम गर्दैछौं । निर्वाचन जितेपछि म जतिबेला पनि वडाबासीकै साथमा रहन्छु भनेर बाचा गरेको थिए । उहाँका सुखदुखमा साथ दिन्छु भनेको थिए, म अहिले पनि वडाबासीकै साथमा रहिरहेको छु । मैले उहाँहरुका सुखदुखमा साथ दिने गरेको छु । निर्वाचित भएयता स्थानीय तहले निर्वाचित प्रतिनिधि प्राप्त ग¥यो र त्यसको एउटा पात्र म पनि हुँ । निर्वाचनपछि कामको चाप पनि निक्कै धेरै छ । जनताका दैनिकीहरुसँग हामी भिडिरहेका छौं । उहाँहरुको सेवामा हामी तल्लिन भइरहेका छौं । विकासको धेरै क्षेत्रमा केही हदसम्म सुधार भए पनि अझै पनि धेरै चुनौतीहरु थपिँदै गएका छन् । त्यसलाई छिचोल्ने प्रयत्न गर्दैछौं ।
हामीले यहाँको समुदायको सर्वाङ्गिण विकासका लागि संयुक्त रुपमा पहल गरिरहेका छन् । वडा नं. ३ मा रहेका २७ वटा टोलभित्रका सडकहरुको स्तरोन्नती भएको छ । नालीसहित १५ किलोमिटर सडक पीसीसी भएको छ भने झण्डै १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यस हिसाबले हाम्रो वडाभित्र ६० प्रतिशत सडक पीसीसी र कालोपत्रे भइसकेका छन् भने बँँकी ४० प्रतिशत सडकको स्तरोन्नती आगामी आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । वडाभित्र खानेपानीको सहज पहुँचका लागि रम्भापुर जाने चौराहमा खानेपानी ट्याङ्की निर्माणधिन अवस्थामा रहेको छ । बोरिङ्ग जडान र कम्पाउण्ड वाल निर्माण भएर ट्याङ्की निर्माण र पाइपलाइन विछ्याउने कार्य सुरु भएको छ ।
वडा पालिकामा तीन वटा मदरसासहित ९ वटा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये आधारभूत विद्यालय बन्जारे गाउँलाई माध्यमिक विद्यालय बनाउने तयारी थालेका छौं । त्यसका लागि २ कोठे भवन निर्माणसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै अन्य विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माणका काम भइरहेका छन् । नेराप्रावि इन्द्रपुरमा २ कोठे पक्की र २ कोठे टिनले छाएका दुई वटा भवन बनेका छन् । नेराप्रावि जुगनभरियामा पनि २ कोठे पक्की बनेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि वडापालिकामा स्वास्थ्य सुविधा राम्रो थिएन । हामी निर्वाचित भएर आएपछि इन्द्रपुर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा १० कोठे भवन निर्माणसँगै स्तरोन्नती गरी प्रसुति गृह सञ्चालनको तयारी थालेका छौं । यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको वडा भए पनि हालसम्म भित्रि गाउँहरुमा विजुली बत्ती पुग्न सकेको थिएन । हामी निर्वाचित भएर आएपछि विजुली बत्ती नपुगेका सबै बस्ती र टोलमा विद्युतीकरणको काम गरेका छौं । हामीले विद्युतीकरणका लागि वठाभित्रका २७ वटा गाउँमा ४०० विद्युत पोल तथा तार लगाएका छौं । वडा पालिकाका अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित भएकोले कृषिलाई आधुनिकीरण गर्नेतर्फ विशेष पहल गरेका छौं । किसानहरुलाई आधुनिक कृषिमा आकर्षित गर्न कृषि धारा र पानी तान्ने मोटर वितरण गरेका छौं । कृषिको आधुनिकीकरणको लागि कृषकहरुलाई आधुनिक तालिम, मल, बीउबीजन वितरण लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिएका छौं ।
‘विकासमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सक्रिय’
बिश्राम बर्मा, वडाध्यक्ष – वडा नं. ४, खजुराखुर्द
जानकी गाउँपालिका वडा नं ४ मा कुल ५१५१ जनसंख्या रहेको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको यहाँको विकास र पुरानो संरचनालाई परिवर्तन गर्नु हो । जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न हामी केन्द्रीत छौं । काम गर्नुपर्ने बिषय धेरै छन् । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य चौकीलाई थप व्यवस्थित गर्नु, शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउनु, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नु, सडक बाटोघाटोलाई स्तरोन्नती गर्नु हो । यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासन संयुक्त रुपमा सक्रिय भएर लागेका छौं ।
बेरोजगारी अन्त्यका लागि सीपमूलक तालिम, साना व्यापार व्यवसायमा आर्थिक लगानी तथा आत्मनिर्भर हुन प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौं । विकास निर्माणको काममा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय भवनहरु निर्माण तथा मर्मत, स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नती, बाटोघाटो, पुल निर्माण यिनै कामहरु अहिले भइरहेका छन् । त्यो सँगसँगै भौतिक निर्माण देखिका अन्य कामहरुमा मानवीय विकासका क्षेत्रमा गर्ने कामहरु, आयआर्जनको क्षेत्रमा गर्ने कामहरु, शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्ने कामहरु यी सबै कामहरुलाई हामीले सकेसम्म समुचित ढंगबाट लिइरहेका छौं ।
हामीले निर्वाचित भइसकेपछि सुरुवाती चरणमा वडाका गाउँबस्ती र टोलहरुमा हिलो हटाउने अभियान चलाएका थियौं । अहिले वडाभित्र रहेका १५ वटा गाउँबस्ती र टोल हिलोमुक्त बनेका छन्, सडकहरु कालोपत्रे, पीसीसी र ग्राभेल बनेका छन् । हालसम्म वडाभित्र सबै सडकहरु ग्राभेल भइसकेका छन् । वडाभित्र ३० किलोमिटर ग्राभेल, १५ किलोमिटर पीसीसी र केही सडकहरु कालोपत्रे भइसकेका छन् । विभिन्न बस्तीहरुलाई जोड्नका लागि पक्की पुल निर्माण भएका छन् । यसै आर्थिक बर्षभित्र झण्डै २५ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ ।
हामीले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न किसानहरुलाई उन्नत जातका बीउबीजन, पम्पसेट, किटनाशक औषधि वितरणसँगै जनचेतनामूलक कामहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । पशुपालक किसानहरुका लागि घरघरमै सेवा प्रवाह गर्दै पशुहरुलाई निशुल्क औषधि वितरण गरिरहेका छौं । गोठ सुधारका कामहरु भइरहेका छन् । किसानका लागि तोरी, तरकारी, आलु, काउली, सागपात, धान, गहुँ खेती लगायतका उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ नियमित कामहरु भइरहेका छन् । प्रसुति गृह यसैबर्षबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । स्वास्थ्य चौकीबाटै करिब ३५ प्रकारका औषधिहरु निशुल्क वितरण भइरहेका छन् । वडावासीलाई स्वास्थ्य सेवा सहजरुपमा प्रदान गर्न नियमित घरदैलो सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न घरघरमै पुगेर नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि कोरानाका कारण ४ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ । अहिले कोरोना महामारीका बेला हामीले वडाबासीलाई सुरक्षित राख्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई गरेका छौं ।
गुणस्तरीय शिक्षालाई हाम्रो प्राथमिकता हो । यहाँ रहेका ५ वटा विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार शिक्षक हुनुहुन्छ । तर, अहिले कोरोनाका कारण शैक्षिक पठनपाठनमा निकै अवरोध आएको छ । विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार हुने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी शैक्षिक गुणस्तरलाई बढाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं । यसै बर्ष वडालाई बालबिवाहमुक्त घोषणा गर्न सफल भएका छौं । पूर्वाधार र कक्षाकोठा पर्याप्त छन्, अपुग भएका विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा वडाभित्र उद्योगहरु थपिने क्रम पनि बढेको छ । जसका कारण वडाबासीहरुका लागि रोजगारीको सिर्जना पनि भएको छ ।
वडा नं. ४ मै जगदम्बा स्टीलले ठूलो फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । साना उद्योगहरु थपिने क्रम पनि बढिरहेको छ । वडाभित्रै आधा दर्जन बढी इँट्टा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । उद्योगहरुको थपिने क्रम बढेसँगै अहिले वडाभित्रका २०० बढी नागरिकले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाउनुभएको छ । हामीले आगामी दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने छौं । आन्तरिक स्रोत कम हुँदाहुँदै पनि हामीले सोचेभन्दा बढी विकासका कामहरु गरेका छौं । जनताको आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रीत भएर धेरै काम गरेका छौं, तर अझै थप सुधारका कामहरु गर्न बाँकी नै छ, यसतर्फ पनि हामी सचेत छौं ।
‘विकासका लागि दिनरात खटेका छौं’
रमेशकुमार बर्मा, वडाध्यक्ष – वडा नं. ५, बेलहरी
जानकी गाउँपालिका वडा नं ४ मा कुल ५२८९ जनसंख्या रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामीले काम सुरु गरेको यो झन्डै चार वर्षको अवधिमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र स्थानीय आवश्यकता अनुसार सूची तयार पारेर हामीले काम गरिरहेका छौं । वडाध्यक्ष भएपछि थप जिम्मेवारी बढेको छ, र ईमान्दारीपूर्वक जनताको सेवामा समर्पित छु । अबको बाँकी कार्यकालमा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा यो वडापालिका अति नै पछाडी पारिएको स्थान हो । यस वडापालिकामा धेरै वर्ष पहिलेका वस्तीहरु छन् ।
जानकी गाउँपालिकाको अन्य वडाभन्दा शैक्षिक, आर्थिक, कृषि, प्रविधि, रोजगारी, स्वास्थ्य लगायत जनताको आधारभूत आवश्यकताको सवालमा बेलहरी पहिलेदेखि नै अलि पछाडि नै परेको थियो । जनताको व्यापक गुनासो र समस्या हुँदाहुँदै बेलहरी वडापालिका अन्तरगतका गाउँबस्तीहरु ओझेलमा परेका थिए । निर्वाचनपछि हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विकास र परिवर्तनका लागि दिनरात खटेर काम गरिरहेका छौं । वडापालिकाभित्रका सयौं बर्ष पुराना बस्तीहरु अझै पनि मध्यम तथा मुख्य सडकसम्म जोडिएका छैनन् । हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता भनेकै सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नती हो ।
हामीले वडाभित्र हालसम्म ५३३ मिटर सडक कालोपत्रे, ४ किलोमिटर सडक पिसिसी, ५ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ५ किलोमिटर सडकमा माटो पटान गरेका छौं । एक किलोमिटर ३४० मीटर सडकको दुवैतिर नाली निर्माण भएको छ । सडक स्तरोन्नती हुँदा वडाबासीलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । वडा कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ भने वडाभित्र रहेको श्यामसुन्दर नागाबाबा कुटीको सामुदायीक भवन निर्माणसँगै १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा पर्यटकीय ताल निर्माणको काम गरेका छौं । यसले यस वडापालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा सौन्दर्य बढाउने हामीले विश्वास गरेका छौं ।
साना–ठुला उद्योगहरु खुल्ने क्रम सुरु भएसँगै त्यसका लागि पनि प्रमुख प्राथमिकता सडक निर्माण र भएका सडकहरुको स्तरोन्नती जरुरी छ । यस वडापालिकाभित्र साना–ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम सुरु भएको छ । यसले गाउँपालिकाकै आन्तरिक स्रोतमा टेवा पु¥याउने देखिन्छ । अहिले वडापालिकामा सबैभन्दा ठूलो उद्योगका रुपमा जयअम्बे स्टील्स प्रालिले आफ्नो उत्पादन सुरु गरेको छ । मानसरोवर प्लास्टिक उद्योग, खानेपानी विरतणमा प्रयोग हुने सामाग्री निर्माण गर्ने उद्योग, इँट्टा उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । उनीहरुको आवागमनका लागि पनि सडक पूर्वाधार निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरसँगै जोडिएको वडा भए पनि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा धेरै उद्योगहरुले यहाँ आउने इँच्छा भए पनि आउन हिचिकचाइरहेका छन् । हामीले शिक्षा, सडक, यातायात, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि लगानी अभावमा गर्न सकेका छैनौं । हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं । जानकी गाउँपालिका वडा नं. ५ अहिलेसम्म कक्षा ८ भन्दामाथिको अध्ययन गर्ने विद्यालय र मदरसासमेत छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमात्रै हैन, शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो वडा धेरै पछाडी रहेको छ । वडाको शैक्षिक अवस्थामा विगतको तुलनामा केही सुधार भएको छ ।
वडाका सबै नागरिकलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने चुनौति छ, अझै पनि कतिपय बालबालिकाहरु शिक्षाको मुलधारमा आउन सकिरहेका छैनन् । हामीले यसका लागि अथक मेहनत गरिरहेका छौं । वडाभित्र रहेका चार वटा आधारभूत विद्यालय र दुई वटा मदरसा रहेका छन् । सबै विद्यालयमा कम्पाण्ड वाल निर्माण गरिएको छ । माध्यमिक विद्यालय नहुँदा वडाभित्रका बालबालिकालाई पठनपाठनमा केही समस्या भएको छ । माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । वडाबासीहरुको शैक्षिक चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न खाले सकारात्मक प्रयासहरु भएका छन् ।
शिक्षासँगै स्वास्थ्यतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ । स्वास्थ्य चौकी बेलहरीको स्तरोन्नतीसँगै प्रसुति गृह निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम गरेका छौं । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आधुनिक कृषिमा लगानी बढाएका छौं । वडा नं. ५ भित्रका आठ वटै गाउँका किसानलाई पम्पसेट, मोटर र चारा मेसिन (घाँस काट्ने मेसिन) वितरण गरेका छौं । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै बीउबीजन, मल, सिचाई सुविधा लगायतमा पर्याप्त ध्यान दिएका छौं । गाईभैसी पाल्ने कृषकलाई आधुनिक तालिमसँगै गाई र भैंसी वितरण गरेका छौं । अझै पनि वडापालिकाभित्र धेरै काम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सबैको सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ ।
‘विकासमा वडाबासीको रचनात्मक सद्भाव’
सुरेश अहिर, वडाध्यक्ष – वडा नं. ६, गनापुर
जानकी गाउँपालिका वडा नं ६ मा ५८०५ जनसंख्या रहेको छ । हामीले वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो मुख्य काम भनेको जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हो । निर्वाचित भएयता मैले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरेको छु । अब बाँकी अवधिमा मैले गरेका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ, तर सम्पन्न हुनेछन् । हरेक वर्ष वडाबासीको राय सुझाव र जनसहभागिता अनुसार काम गरेको छु । वडामा आएको बजेटले स्थानीयको माग कति पूरा गरेका छौँ भनेर मापन गर्ने हो । आफ्नो अठोटसँगै वडाका सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यका लागि सबै वडाबासी र जनप्रतिनिधिहरुको श्रेय र सद्भाव रहेको छ ।
हामी यो अवधिसम्म आइपुग्दा यही भावना र सोचले अघि बढेका कारण धेरै सफल भएका छौं । अन्य स्थानीय तहमा जस्तै हामीले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सडक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौं । हालसम्म वडाभित्र १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने ५ किलोमिटर पीसीसी र सबै बस्तीहरुका भित्रि बाटोहरुमा नाली निर्माण भइसकेका छन् । थप २६ सय मिटर सडक कालोपत्रे यसैबर्ष हुँदैछ । वडाभित्र माध्यमिक विद्यालय नहुँदा पठनपाठनमा समस्या हुँदै आएको थियो । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि हामीले भाटनपूर्वामा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा आएको छ । यसले यहाँका बालबालिकालाई मावि तहको अध्ययनका लागि अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ ।
मावि भाटनपूर्वामै दुई तलाको आठ कोठे भवन निर्माण गरेका छौं । कपासी प्राविमा पनि दुई कोठे भवन निर्माण भएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर उकास्न हरसम्भव प्रयास गरेका छौं । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै प्रसुति गृहको भवन तथा तालिम हल निर्माण सम्पन्न भएको छ । छिट्टै प्रसुति गृह सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । जसका कारण स्वास्थ्यमा स्थानीय नागरिकको पहुँचमा थप वृद्धि हुनेछ । आधुनिक कृषिका लागि किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आधुनिक खेतीका लागि बीउबीजन, मल, सिचाई सुविधा लगायतमा पर्याप्त ध्यान दिएका छौं । तरकारी, पशुपालन, बीउबीजन, निशुल्करुपमा वितरण गर्दै आएका छौं । यसले किसानहरुलाई निकै राहत भएको छ भने कृषिमा लाग्न प्रेरित बनाएको छ ।
पश्चिम नेपालकै धेरै उद्योगहरु रहेको वडा नं. ६ मा साना तथा ठूला गरी ७५ उद्योग सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाले उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्न उद्योगको पुँजीअनुसार न्यूनतम १० हजारदेखि २२ हजारसम्म राजस्व तोकेको छ । यी उद्योगहरुबाट बार्षिक झण्डै ४० लाख राजस्व वडापालिकामार्फत संकलन हुँदै आएको छ । यसले समग्र गाउँपालिकाकै आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा टेवा पु¥याएको छ । उद्योगहरुकै कारण स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना भएको छ । यहाँका धेरै नागरिकहरुले गाउँमै रोजगार पाएका छन् । त्यस्तै वडाभित्र ५० लाखसम्मका ठूलो आयोजनाहरु पनि सञ्चालनमा छन् ।
राज्यको पुनःसंरचनासँगै बाँकेले प्रशासनीक र राजनीतिक शक्ति गुमाए पनि पश्चिम नेपालको ‘आर्थिक हब’ बन्ने दौडमा रहेको बाँकेमा एकपछि अर्को उद्योगहरु खुल्ने क्रममा बढेको छ । ती उद्योगहरुको रोजाइँमा जानकी गाउँपालिका नै पर्ने गरेको छ । राजनीतिक स्थिरतापछि देशभर लगानीको वातावरण बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बाँकेलाई पनि मिलेको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै बाँकेमा ठूला उद्योग सञ्चालनको सङ्ख्या बढ्दैछ । बाँकेमा उद्योग खोल्दा सबैको नजर जानकी गाउँपालिकामै रहेको पाइन्छ । यो गाउँपालिका नेपालगन्ज–कोहलपुर सडक खण्डसँगै जोडिएर पश्चिमतर्फ गनापुर–खजुराखुर्द जाने बाटोमै लहरै उद्योगहरु स्थापना भइरहेका छन् भने थपिने क्रम बढेको छ ।
ठूला उद्योग स्थापना हुन थालेपछि जानकी गाउँपालिका लगानीका लागि अब्बल क्षेत्र हो भन्ने सन्देश देशभर प्रवाह भएको छ । स्थानीयदेखि देशका ठूला र नाम चलेका औद्योगिक समूह लगानी गर्न हौसिएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र ऊर्जा लगायतका समस्या समाधान भएपछि लगानीको उत्साह थपिएको छ । यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्दा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान ढुवानीसँगै कारोबारमा सजिलो हुने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीले जानकी गाउँपालिकाको गनापुरलाई रोज्ने गरेका छन् । जसका कारण जानकी गाउँपालिका औद्योगिक ‘हब’को रुपमा विकास भइरहेको छ । यो जानकी गाउँपालिकाका लागि मात्रै नभएर बाँके जिल्लाकै लागि आफैंमा ‘सुनौलो’ ठाउँ बनेको छ ।
‘एमाले’ र ‘सूर्य’का बहुमत पुर्‍याउन सांसदको खोजी !
विपद् बुलेटिन : सात महिनामा ४६३ को मृत्यु, ८०३ घाइते, १०१ बेपत्ता
‘हामी खतरनाक महामारीसँग लडिरहेका छौँ’
५०० परिवार जग्गाधनी पुर्जाविहीन